सेयर | Corporate Nepal
एनआईसी एशिया बैंकले घोषणा गर्यो १५.७८ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५.७८ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ७३ करोड ४६ लाख रुप…
शेयर बजार उच्च अंकले बढ्यो, फाइनान्स र हाइड्रोमा उत्साह
काठमाडौँ । शेयर बजार आज उच्च अंकले बढेको छ । साताको पहिलो दिन हिजो पनि बजार बढेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार हिजो बजार २७.५१ अंकले बढेको थियो भने आज पनि ८७.६३ अंकले बढे…
सिद्धार्थ बैंकद्वारा १ अर्ब ६४ करोड लाभांश वितरण गर्ने घोषणा
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजीको १४.२५ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश(बोनस शेयरको कर प्रय…
नेपाल बैंकले घोषणा गर्यो लाभांश घोषणा, नगद र बोनस कति ?
काठमाडौँ । नेपाल बैंकले शेयरधनीहरुलाई १७ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १४ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश(लाभांश करसमेत गरी) …
कुमारी बैंक र गुराँस लघुवित्तको शेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौँ । बोनस शेयर पछि दुई कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार कुमारी बैंक र गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य समायोजन भएको हो । यसैक्रममा कु…
सामलिङ पावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, तपाईँले भर्नु भयो ?
काठमाडौँ । सामलिङ पावर कम्पनीको साधारण शेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । कात्तिक ४ गतेदेखि निष्काशन खुला भएको आईपीओमा आज कात्तिक ८ गते कार्यालयसमय भित्र आवेदन दिन पाइने बिक्री प्रबन्धक न…
शेयर कारोबार २७ अंकले बढ्दा पौने तीन अर्बको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)परिसूचक २७.५१ अकले बढेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक १.०८ प्रतिशतले बढेर २५८४.५२ विन्दूमा पुगेको हो । शेयर बजार बढेको दिन २२५ कम्पनीको कारोबार भएक…
सपोर्ट लघुवित्तले घोषणा गर्यो ३१.५७ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौँ । सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३१.५७ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले आव २०७७/७८ को वितरणयोग्य नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत बोनस शेय…
माछापुच्छ्रे र सानिमा बैंकको शेयर मूल्य समायोजन, कति कायम भयो ?
काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बैंक र सानिमा बैंकको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार माछापुच्छ्रेले शेयरधनीहरुलाई १३.३० प्रतिशत बोनस शेयर दिने भएपछि प्रतिशेयर मूल्य रु. ३२२.…